महेश बाबुलाई सुनील शेट्टीको जवाफ- ‘भारतलाई चिन्नेले बलिउड कलाकार चिन्छन्’ - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com महेश बाबुलाई सुनील शेट्टीको जवाफ- ‘भारतलाई चिन्नेले बलिउड कलाकार चिन्छन्’ - खबर प्रवाह
महेश बाबुलाई सुनील शेट्टीको जवाफ- ‘भारतलाई चिन्नेले बलिउड कलाकार चिन्छन्’
भारतका दुई ठूला फिल्म इन्डस्ट्री बलिउड र साउथबीच यतिबेला भाषा विवाद चर्किएको छ । यसको सुरुवात साउथका किच्चा सुदीप र बलिउडका अजय देवगनले गरेका थिए । यसपछि हालै तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबुले आफूलाई बलिउडले अफोर्ड गर्न नसक्ने र बलिउडमा काम गरेर समय बर्बाद गर्न नचाहने अभिव्यक्ति दिएपछि दुई इन्डस्ट्रीबीच वाकयुद्ध उत्कर्षमा पुगेको छ ।
यसैक्रममा, दुई इन्डस्ट्रीबीच चर्किएको विवादको विषयमा बलिउड सुपरस्टार सुनील शेट्टीले भनेका छन्, ‘मैले पनि साउथ फिल्ममा काम गरेको छु, तर त्यसको कर्मभूमि मुम्बई हो । मलाई लाग्छ कि साउथ र बलिउडको विवाद सोसल मिडियाका कारण भएको हो । हामी सबै भारतीय हौं । यदी डिजिटल प्लेटफर्ममा फिल्म हेरिन्छ भने त्यहाँ भाषाले अर्थ राख्दैन, कन्टेन्ट महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’
उनले अगाडि भनेका छन्, ‘हाम्रो समस्या के हो भने हामीले दर्शकलाई नै भुलिसकेका छौं । हामीले उत्कृष्ट कन्टेन्टमा काम गर्नुपर्ने हो । यद्यपि, फिल्म होस् वा ओटीटी, बाउ सधैं बाउ नै हुन्छ । बलिउड सधैं बलिउड हुनेछ । भारतलाई चिन्नेहरुले बलिउडका कलाकारहरुलाई पनि चिन्दछन् । यो एक यस्तो यात्रा हो, जसमा हामीले गम्भीर रुपमा सोच-विचार गरेर उत्कृष्ट कन्टेन्ट दिनुपर्छ ।’
महेश बाबुले निर्माण गरेको फिल्म ‘मेजर’को ट्रेलर रिलिज कार्यक्रममा उनले बलिउड फिल्मबाट आफूलाई अफर आएको भए पनि बलिउडले आफूलाई अफोर्ड गर्न नसक्ने भएकाले समय बर्बाद गर्न नचाहेको बताएका थिए । यो अभिव्यक्ति विवादमा तानिएपछि महेशले स्पष्टिकरण दिँदै सबै भाषाप्रति आफ्नो सम्मान रहेको र आफूलाई साउथ फिल्ममा काम गर्न सहज लाग्ने बताएका छन् ।
मंगल ग्रहमा भेटियो एलियनको घरको ढोका
प्रचण्डद्वारा पुलिस स्कुल शान्तिपुरमा मतदान
आँचललाई बल्ल हिरोइन भएको महसुस !
अभिनेत्री आँचल शर्माको बेलाबेला चर्चा भइरहन्छ । पछिल्लो समय भने उनी अभिव्यक्तिको कारण चर्चा छाएकी छिन् । जुन उनले फिल्म ‘वर एण्ड बधु’को कार्यक्रममा दिएकी थिइन् । मिलन चाम्सको निर्देशन रहने फिल्मको बुधबार औपचारिक निर्माण घोषणाका लागि एक कार्यक्रम आयोजना भएको थियो । कार्यक्रम आयोजना स्थलमा भव्य सजावट सहित रेड कार्पेट समेत बिच्छ्याइएको थियो […]
कालो कट आउट ड्रेसमा अनुष्का शर्माको हट लुक, विराट कोहोलीले तारिफ गर्दै भने वाउ !
काठमाडौँ। अनुष्का शर्मा आजभोलि आफ्नो लुक्सका कारण चर्चामा छिन् । करण जोहरको ५० औं जन्म दिन पार्टीमा धेरै बलिउड स्टारहरु सामेल भएका थिए । उक्त पार्टीमा अनुष्का ग्लैमरस स्टाइलमा पुगेकी थिइन् । अनुष्काले पार्टीका लागि निकै आकर्षक पोशाक छनोट गरिन् । उनले कालो रंगको लुगा लगाएकी थिइन् । यो हाई स्लिट ड्रेसमा फ्रन्ट कट आउट […]
बिहे गर्न तयार भएकी राखीलाई प्रेमीको घरबाट अस्वीकार गरेपछि…
काठमाडौं । राखी सावन्तले आफ्नो वर्तमान प्रेमी आदिललाई पूर्व प्रेमिका दुर्रानीको फोन आए लगत्तै आदिलसँग विवाह गर्ने घोषणा गरेकी छिन् । राखीले यसै महिनाको सुरुवातमा आफ्नो नयाँ सम्बन्ध सार्वजनिक गर्नुका साथै आफूभन्दा ६ वर्ष कान्छो भएको खुलासा पनि गरेकी थिइन् । रोशिना डेल्वरी राखीको वर्तमान प्रेमी आदिल दुर्रानीको पूर्व प्रेमिका हुन । रोशिना र […]
छोटो स्कर्टमा मौनी रोयको हट अवतार
काठमाडौं । यतिबेला अभिनेत्री मौनी रोयको हट फोटो पोजले सामाजिक सञ्जालको तापक्रम बढाइरहेको छ । मौनी रोयले प्रायः आफ्नो किलर अभिनयबाट फ्यानको मन जित्ने गर्छिन् । हालै उनले केही यस्ता तस्विर सेयर गरेकी छिन् । जुन देखेर जो कोहीको मन छोएकी छिन् । मौनीले आफ्नो इन्स्ट्राग्राममा आफ्ना केही तस्विर पोस्ट गरेकी छिन्। जसलाई हेरेर उनको […]
४३ वर्षकी कनिकाले दोस्रो पटक विवाह गर्दै
‘बेबी डल’ गीत गाएर चर्चित बनेकी कनिका कपुरले २० मे अर्थात् आज आफ्ना प्रेमीसँग विवाह गर्ने भएकी छिन् । यो कनिका कपुरको दोस्रो विवाह हो । कनिकाको विवाह अघिका तस्बिर सोसल मिडियामा अत्यधिक चर्चित भइरहेको छ । कनिकाको हल्दीपछि अब उनको मेहेन्दीको फोटो सार्वजनिक भइरहेका छन् । कनिका कपुरले इन्स्टामा मेहेन्दीको तस्बिर सेयर गर्दै लेखिन्, […]
ऐश्वर्या रायको विश्वभर चर्चा : ४ महिना लगाएर तयार पारियो पहिरन
काठमाडौं । विश्व प्रतिष्ठित कान्स फिल्म फेस्टिभलमा यसपटक पनि बलिउडको दबदबा देखिएको छ । दीपिका पादुकोण जुरीमा छिन् भने ऐश्वर्या राय, हिना खान, हेली शाह, नवाजुद्दिन सिद्दिकी, आर माधवनसहित अन्य भारतीय कलाकारले रेडकार्पेटमा छाए । कान्सको तेस्रो दिन नीला आँखावाली अभिनेत्री ऐश्वर्याले सौन्दर्यको जादु रेडकार्पेटमा छरिन् । फेसन डिजाइनर गौरव गुप्ताको पिंक गाउन पहिरनमा उनी […]